अक्टोबर क्रान्तिपछि लेनिनले समाजवादी सत्ता संचालनका लागि पूरानो व्युरोक्रेसीलाई यसरी पारे नामेट-Nepali online news portal
अक्टोबर क्रान्तिपछि लेनिनले समाजवादी सत्ता संचालनका लागि पूरानो व्युरोक्रेसीलाई यसरी पारे नामेट
पुँजीपतिहरु, तिनका बफादार नोकर र कर्मचारीहरु देशलाई अव्यवस्थाको धरातलमा झोक्न चाहन्थे र सोभियत सत्ता उल्टाउने प्रयास गर्दै थिए ।
-अलेक्सेएभ, कार्चोभ, त्रोइत्स्की
फरवरी क्रान्तिले लेनिनलाई रुस फर्किने सम्भावना दियो । जनता आफ्नो नेताको प्रतिक्षा गर्दै थिए । तर अस्थायी सरकार तथा अरु देशहरुका पुँजीपतिहरु लेनिनसँग तर्सन्थे । उनीहरुले हर तरिकाले लेनिनलाई रुस फर्कन नदिने कोसिस गरे ।
विभिन्न कठिनाईहरु पार गर्दै लेनिन ३ अप्रिल, १९१७ को दिन पेत्रोग्राद आईपुग्नु भयो । ट्रेन धेरै राति अबेला फिनल्याण्ड स्टेशनमा आईपुग्यो । हजारौं मजदुरहरु, सैनिक तथा नौसैनिकहरु साँझदेखि नै स्टेशन अगाडिको चोकमा जम्मा भैसकेका थिए र आफ्नो नेताको प्रतीक्षा गर्दै थिए । उनीहरु लेनिनको विवेकपूर्ण कुरा, रुसमा घटिरहेका घटनाहरुबारे उहाँको मूल्याङ्कन सुन्न चाहन्थे ।
भोलिपल्ट, ४ अप्रिलको दिन बोल्शेभिकहरुको वैठकमा लेनिनको पार्टीको भावी क्रियाकलापसम्बन्धी योजना प्रस्तुत गर्नुभयो । लेनिनले भन्नुभयो– ‘जनताको अगाडि बडो धैर्यपूर्वक अस्थायी सरकारका सव कबुलहरुको कपटी चरित्र स्पस्ट पार्नुपर्छ । सोभियतहरुमा मेन्शेभिकहरु तथा ऐसेरहरुको गद्दारीको भन्डाफोर गर्नुपछ, सोभियतहरुलाई बोल्शेभिकहरुको पक्षमा ल्याउनुपर्छ । मजदुर एवम् सैनिक डेपुटीहरुका सोभियतहरुले किसानहरुलाई जमिन दिनुपर्छ, कलकारखानाहरुमा मजदुर नियन्त्रण राख्नुपर्छ, रुसलाई युद्धबाट उम्काउनुपर्छ । जनताको समर्थनसहित सोभियतहरुले देशको सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्नुपर्छ र उनीहरु यो काम गर्न सक्छन् ।
‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतहरुलाई !’ भन्ने जुन नारा लेनिनले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो, त्यसले क्रान्तिको शान्तिपूर्ण बाटो देखाउँथ्यो । बोल्शेभिकहरुले मजदुर, सैनिक तथा किसानहरुबीच व्यापक प्रचारकार्य सुरु गरे । उनीहरुको स्पष्ट कार्यक्रम श्रमिक जनताको आन्तरिक अभिलाषा अनुकुल थियो । मजदुर, किसान एवम सैनिकहरुबीच बोल्शेभिकहरुको प्रभाव तीव्रगतिले बढ्न थाल्यो ।
कारखानाको चोकमा मजदुरहरु जम्मा भएका थिए । आमसभा चल्दै थियो अस्थायी सरकारका कुनै मन्त्री बडो गरमागरम भाषण गर्दै थिए, तर आफ्नो जीवनअवस्थामा कहिले सुधार आउने हो भन्ने कुरा मजदुरहरुले बुझ्न सकिरहेका थिएनन् । मन्त्री भन्दै थिए–‘सबैभन्दा पहिला लडाँइ जित्नुपर्छ, त्यसपछि चुनाव पर्खनुपर्छ, त्यसपछि…..। भीडमा नाराहरु सुनिन थालिए–‘लडाइँ मुर्दावाद ! रोटी, शान्ति र स्वतन्त्रता देउ !’ सिट्टीहरुको आवाज र होहल्लाबीच मन्त्री आफ्नो भाषण नसकई मन्चबाट ओर्लन्छन् । मजदुरहरु बडो ध्यानपुर्वक एक बोल्शेभिक नेताको भाषण सुन्दैछन् । लेनिनवादी कार्यक्रमको प्रत्येक शब्द उनीहरुलाई स्पष्ट हुन्छ ।
२५ अक्टुबरको साँझपख, जब शिशिर प्रासादमाथि हमला चल्दै थियो, सोभियतहरुको दोस्रो अखिल रसियाली महाधिवेशन सुरु भयो । तारद्वारा सम्पूर्ण देशभरी ‘मजदुर सैनिक एवं. किसानहरुलाई’ सम्बोधन गरिएको अपिल प्रसारित गरियो । यो अपिल लेनिनले लेख्नुभएको थियो । अपिलमा भनिएको थियो : ‘मजदुर, सैनिक एवं. किसानहरुको व्यापक बहुमतको समर्थनसहित, पेत्रोग्रादमा सम्पन्न मजदुर तथा नगररक्षक सेनाको विजयी विद्रोहको समर्थनसहित यस महाधिवेशनले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको छ…..महाधिवेशनको निर्णयअनुसार इलाकाहरुमा सम्पूर्ण सत्ता मजदुर, सैनिक एवं. किसान डेपुटीहरुका सोभियतहरुको हातमा आएको छ र यी नै सोभियतहरुले वास्तविक क्रान्तिकारी अवस्था सुनिश्चित गर्ने अभिभारा आफ्नो हातमा लिनेछ ।’
श्रमिक जनताको युगौ पुरानो सपना साकार भयो । मजदुर तथा किसानहरु देशको मालिक बने । सोभियतहरुको महाधिवेशनले विश्वमा पहिलो श्रमिक सरकार– सोभियत जनकमिसार परिषद गठन ग¥यो । भ्लादिमिर इल्यीच लेनिन सर्वसम्मतिद्वारा नयाँ सरकारको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो ।
सोभियत सरकारले यी सब ऋणहरु खारेज गरिदियो, जुन जारशाही सरकार र अस्थायी सरकारले विदेशी तथा रुसी पुँजीपतिहरुसँग लिएको थियो । देशले आफूलाई सरकारी ऋणहरुको भारबाट मुक्त ग¥यो । विदेशी ऋणको रकम झण्डै १६ अरब रुबल र आन्तरिक ऋण १७ अरब स्वर्ण रुबल पुग्थ्यो । राजकीय आज्ञाप्तिहरुद्वारा सब मानपदवीहरु र मानिसहरुलाई श्रेणीहरुमा विभाजन गर्ने प्रथा बदर गरियो, लोग्नेमान्छेहरु र आइमाईहरुबीच समानता कायम गरियो र देशभरीका सम्पूर्ण जनजातिहरुलाई समान अधिकार प्रदान गरियो । विध्वंस तथा प्रतिक्रान्तिको विरुद्ध संघर्ष गर्न फेलिक्स जेर्जीन्स्कीको नेतृत्वमा अखिल रसियाली असाधारण कमिशन गठन गरियो । जनन्यायलय र जनमिलिशिया गठन गरियो । सेनामा पनि सैनिक सोभियतहरुको हातमा सत्ता सुम्पियो । मजदुर तथा किसाान परिवारहरुबाट आएका व्यक्तिहरु सेनाको मुख्य मुख्य पदमा मनोनित भए ।
रुसका श्रमिक जनता कठिन परिस्थितिमा एक नयाँ जीवनको निर्माण गर्दै थिए । उनीहरुसँग कुनै अनुभव थिएन । यसैबेला मजदुर तथा किसानहरुको राज्यको शत्रुहरु नवजात सोभियत राज्यका विरुद्ध संघर्षको तयारी गर्दै थिए ।
(सोभियत र महान अक्टोबर क्रान्तिको इतिहास पुस्तकबाट) ।